Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 43
Mpandainga, tsy mahazaka andaingana…
Par Taratra sur 07/07/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Ratsy tokoa ny lainga fa na ny mpandainga aza, hono, tsy tia azy: tsy zakan’ny mpandainga koa ny andaingana. Nefa loza iray, loza roa: misy tsy menatra ny mandainga, na fantatry ny hafa rehetra izao aza ny marina. Lany henatra (fa tsy lany lainga) sa mihevitra ny hafa ho tsy mahalala na adala? Mby ao […]
Par Taratra sur 05/07/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
«Ny mahery tsy maody, tsy ela velona», rehefa mananatra ny zanany na ny mpiara-belona aminy, ireo Raiamandreny. Ilana fitandremana mantsy ny fiainana, fa tsy azo ataotao foana. Mila fandinihana sy famakafakana tsara vao mandray fanapahan-kevitra. Na izany aza, tsy mila kaodikaody satria ny olona manao ratsy matetika no kaodikaody. Tsy mahatombin-tsiraka fa toa mahimahina, amin’izay […]
Manam-panjakana, mpitondra fahefana…
Par Taratra sur 04/07/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Eo ihany ny fahalalam-pomba. Na izany aza, misy “indro kely” tsikaritry ny lava maso mety ho lava fisainana koa. Rehefa ny lehilahy, hono, no mibontsimbontsina, mievotrevotra, mikoropadropaka… mamoha varavaram-piara amin’ny vehivavy: na ilay vehivavy no vaovao, na ilay fiara. Momba ireo tampohin-javatra ny resaka eto. Rehefa tampohin-javatra, hono: ny hifehy sy hitantana izany no zava-dehibe […]